Apple ichagadzirisa iyo ECG algorithm newatchOS 7.2 | Ndinobva mac
Apple kugadzirisa iyo ECG algorithm newatchOS 7.2
Imwe yemitambo mikuru yakasvika pamusika neruoko rweApple Series 4, pamusoro pehukuru hukuru hwechidzitiro, tinoiwana muECG basa, basa iro zvishoma nezvishoma rave kusvika kune dzimwe nyika sezvo raifanira kugamuchira iyo mvumo kubva kuzviremera zvinodzora inoenderana noutsanana zvivakwa.
Uku kushanda, uko kwakatendera vashandisi vazhinji kuti vaone izvo akatambura imwe mhando yekusagadzikana mumoyo, ichavandudzwa pamwe nekuburitswa kweinotevera yekuvandudza yewoseOSOS uye iOS Sezvakataurwa MacRumors, Apple ichavhura neWatchOS 7.2 uye neIOS 14.3 yechipiri vhezheni yeiyo chiyero algorithm.
Zvinoenderana neiyi svikiro, zvinyorwa zviri pamutemo zveIOS 14.3 uye watchOS 7.2 zvinoratidza kuti a yechipiri vhezheni yealgorithm yakashandiswa kuongorora moyo wemutinhimira chichava chimwe chezvinhu zvitsva zvevashanduri vese. Basa reECG rinowedzera wachi isingajairane yemoyo mutinhimira yekuonekwa, iyo inoteedzana nhanho kumashure uye inozivisa kana zviratidzo zveatrial fibrillation zvikawanikwa.
Kubva kuMacRumors vanofungidzira kuti iyi vhezheni 2 yealgorithm inobvumidza iyo ECG kunyorera tarisa atrial fibrillation pakakwirira kwemoyo (patinenge tichirovedza muviri, semuenzaniso).
Zuva rinotarisirwa rekuburitswa kweese mavandudzo yakarongerwa Zvita 14, pamwe nebasa idzva rekunyorera Apple Fitness +, sevhisi inongowanikwa chete mushure mekuisa zvese zviri zviviri.
Chimwe chinhu chitsva chinosvika neWatchOS 7.2 inowanikwa mune ziviso yekuti mudziyo unozotumira riinhi ropa reokisijeni mazinga anowira pasi peiyo yakatarwa padiki, iyo inosanganisirwa nezvinogona kuitika matambudziko emoyo kune mushandisi uye nemamiriro avo akajairika epanyama.
Inofanira kuyeukwa kuti chiyero cheropa reokisijeni haina kuda kupihwa mvumo nechero bato repamutemo sekunge yaive nyaya yeECG.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple kugadzirisa iyo ECG algorithm newatchOS 7.2
Podcast 12x12: Iwo maFace maviri eApple
Iyo AirPods Max yakaturika chikwangwani chakatengeswa!